Hoax » ခက်တော့ခက်ကုန်ပြီ…ခိုင်ရေ	11
အရီးခင်လတ် says: garuda
garuda says: အရီးရေ…ကျွန်တော်ကို ကလည်း..မနေနိုင်မထိုင်နိုင်…အဲဒီလိုဆိုဒ်မျိုးတွေပဲ..သွားသွားကြည့်တတ်တယ်….အမှန်တော့..လေ့လာတဲ့
kai says: Chile Passes Hate Crime Law After Anti-Gay Killing | Fox News Latino
ရာမည says: ဝီရသူ ဆိုတဲ့ အကောင့် သုံးခုတွေ့တယ်
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ချင့်ယုံ …
ဝါးတားတားကြီး ဖြစ်မှာ ကျိန်းသေတယ် … ဟီးဟီး .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1322
ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ says: အဲဒါကြောင့် ဖွဘုတ်လို့ ပြောတာပေါ့..
etone says: အူးယေး ဂလုနရာဇာ ဂွမ်လုံစောင်ခြုံရေ ဖွဘုတ်ပေါ်မှာ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ပေါကြောင်ကြောင်တွေ ရှဲတဲ့ လူက ရှဲ ….. ၊ ဖတ်ပြီး သဘောကျလို့ မိတယ်ဟဆိုပြီး ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ ၊ လုပ်သင့်မလုပ်သင့် မစဉ်းစားပဲ ရှဲတဲ့ လူကလည်း ထပ်ရှဲ …. ဒါနဲ့ပဲ ပွထကုန်တာ … ။ မဟုတ်က ဟုတ်က ရေးထားတာ တွေတော့ အများကြီးတွေ့ တယ် … ဖတ်ပြီး ဒေါသထွက်လို့ …. ပယ်ပယ်နယ်နယ် ထတုပ်ရလျှင်လဲ ဖွဘုတ်ပေါ်တက်ရန်ဖြစ်နေတာ … မကောင်းဘူး ဖြစ်တော့မယ် … ဒီတော့ … အူးလေးရေ …
ဦးနှောက်မရှိတိုင်း … လက်သရမ်းရှဲနေတဲ့ဟာတွေ ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဥာဏ်သိမ်ကြောင်း ပြတယ်လိုကပဲ … ယူဆပြီး ဘလော့လိုက်ပါအေ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 283
garuda says: ကိုယ်တိုင်ကတော့…ဒေါသထွက်လို့ဟုတ်ဘူးအေ(ဒေါသထွက်လည်း ကိုယ်တွေက ဘာမှလုပ်နိုင်ဘူးလေ) သိသင့်တာလေးတွေ သိရအောင်ပါ။ ဒါပေမဲ့.. ဘလိုင်းကြီးဆဲဆို တဲ့ ဆိုဒ် ဆိုရင် တော့အကျိုးမရှိလို့ ဘလော့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပညာသား ပါပါ လူတွေကို ဆွတတ်တဲ့ ဆိုဒ်မျိုးဆိုရင်တော့ ၀င်ကြည့်ဖြစ်တယ်လေ။ သိထားသင့် တာလေးတွေသိထားရအောင်ပါ။ တစ်ခါတစ်လေလဲ သူ့အမြင်
အလင်းဆက် says: အင်း
KZ says: ခက်တော့ ခက်ကုန်ပြီ ဂလုဒ ရယ်။
ခုတလော ဒီ နာမည်ကြားတိုင်း ရင်တွေ ခုန်ခုန်လာလို့ပါ။ ဖဘက ဖွချက်တွေကိုတော့ မတားနိုင်တဲ့ တူတူ
garuda says: အော်..တူမကြီးရယ်..တောင်းပန်ပါတယ်(အောင်လ)…နောက်ဆို..သဂျီးပဲပြောင်းခေါ်လိုက်ပါ့မယ်။ အိုကွယ်..နာမည်ကြားတိုင်း…
ရင်ခုန်တယ်ဆိုတော့….နှလုံးသားလေး က နုနယ်လွန်းလှ ပါတယ်ကွယ်။ ရွာထဲမှာရှိတဲ့ နှလုံးသားကြမ်းကြမ်း စိတ်ကြမ်းကြမ်း ကြီးတွေနဲ့ တော့ မတွေ့ပါစေနဲ့ လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွယ် ဟုတ်တယ်..ဖဘက ဖွချက်က တော့ အစိုးရ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့သင့်ပြီ ထင်ပါတယ်။…အခုတော့ အသံကြောင့် ဖားသေဆိုတာမျိုးလို ဖြစ်နေပြီ။